Inguqulo 0.8.3 – Shortcode Iwijethi sika
Kwangathi 30, 2012 by okunikezwayo 11 Amazwana
Le nguqulo fixes ezinye bugs futhi uyanezela nokweseka shortcode nice evumela ukuthi wena ukubeka iwijethi ngaphakathi post
Lalihlezi Ngaphansi: Izimemezelo ukukhululwa Umake With: minor, ukukhululwa, shortcode
Ungangitshela uma lokhu plugin kusebenzisa ukoma noma libcurl ?
Ngicabanga libcurl sayo imisebenzi umtapo phpcurl
Uzositholaphi ukukhipha inguqulo entsha, nazo zonke nezimagqabhagqabha?
Ngokushesha lapho usulungile… 🙂
Kuphi Singafunda okwengeziwe shortcode?
Isibonelo, kanjani ukuze ukubeke zibe WP amamenyu wakha-in?
Futhi kungani amafulegi engaveli uma ngisebenzisa it (kuphela ibhokisi lokuhlola)?
Ungabona yonke imininingwane mayelana wokunqamulela on http://trac.transposh.org/wiki/ShortCodes.
Angazi uma ingasetshenziswa ngaphakathi kumamenyu wakha-in, kodwa ungakwazi njalo uyazama.
Uma amafulegi ngeke ibonise, thumela i-url empendulweni mina ngizobe ujabule ukuyivula.
Nansi ukuhlobana, futhi ungabona ibhokisi ekhoneni eliphezulu kwesokudla.
Futhi le shortcode enginakho
[tp widget ="amafulegi / tpw_flags_css.php"]
Konje, esihlokweni sakho mayelana wokunqamulela usho lokhu njengesinye ukusebenzisa eziningi iwijethi, kodwa akukho nezinye iziqondiso, kanjani ukushintsha kukho. Isibonelo, kanjani ukususa ezinye amafulegi, shintsha Ukufometha, ukuveza olukumabhekezansi, njll?
Namanje angalithola link, sicela zama contact us yakha.
mayelana flag ukususwa, iwijethi ikhombisa izilimi ukuthi oyilungisile wona ngoba amasethingi kuphela.
drop ngazo nezinye amawijethi bangase owakhethwa usebenzisa ifayela widget ehlukene, abone amawijethi subdirectory we plugin
Siyaxolisa, akazange ihlanganisa link. Kuba http://bit.ly/QnJWAf
Namanje akukho amafulegi nakuba.
Uxolo, Kumele I kubukana kanjani wena, kungenzeka ngegama lakho lokuqala?
Just wakhumbula, kusukela esikhathini eside esadlula kakhulu, kusukela I abafake transposh plugin, lapho ukuthi isiyasebenza, imenyu kwesokunxele in the Dashboard ubalekela. Lapho plugin is deactiveated, imenyu livela aphinde. Ingabe unaso umbono kungani?
Nakhu a sesikrini
Nazi ezimbalwa iziphakamiso yikuphi kakhulu ngcono usability-plugin sika ungenze batusa lona osebenza zami kanye nabalingani. (Kungase bengilokhu basikisela ngaphambi, kodwa engingakayitholi noma iyiphi imininingwane).
1. Ukusebenzisa uhlelo amashothikhathi ikhibhodi nezinye izindlela ukuze ngokushesha ukushintshela ezayo umbhalo block ukuze ngesandla ukuhumusha ekhasini.
2. Yenza plugin aqonde e-mail amakheli, URL nezinye okuqukethwe akufanele siyoke lihunyushwe.
3. Faka phakathi inketho ukukopisha-unamathisele Ukuhumusha lonke ikhasi sika. Ngezinye izikhathi kulula ukuhumusha ku i umhleli lwangaphandle, futhi ngezinye izikhathi usunayo inguqulo ngomumo.
Uzoza emuva nge ngaphezulu!